Waa maxay gargaarka deg dega ahl.
Waa maxay gargaarka deg dega ahl
Sidoo kale, waxaan isna wax iska beddalin qiimaha sigaarka, dadkii cabbi jireyna, tiri ahaan, isma dhimin, siduu ku kaftamay nin dadkii lagu karbaashey ka mid ahaa oo aan Luuq ku waraystay. Waxaa ka mid ahaa:. Mad-habta Xanbaliyada oo aan soomaalidu aqoon jirin ha laga soo guuriyo amaba fikriga Wahaabiyada si toos ah ha ugu abtirsadeene, waxaa mar qura soo shaacbaxay masalooyin dhawr ah oo dadweynihii kala geliyey khilaaf-diineed oo aan awel ka dhex-jirin. Sidaasna waxaa ku abuurma, dadweynaha caraysanna ku kala qaybsada ururro qarsoodi ku dhisma oo, danata madaxdooda iyo ladagaallanka taliska dalkooda ka jira mooyee, aan innaba lahayn qorshe hoggaamineed oo mudan in la soo bandhigo! Waxay isu beddashey magaalo kala-dambayntii lumisay oo ay waddo walba taagan yihiin kooxo ku hubaysan hub nooc walba ah oo laga boobay xeryihii Xoogga Dalka Soomaaliyeed; xeryahaas oo u gacan-galay kolba qabiilkii degganaa magaalo kasta oo ay ku yiilleen.
Gobolka Gedo iyo Ururka AlItixaad AlIslaami maktabadda AfSoomaaliga
Baro oo naf ku badbaadi habka CPR Gargaarka Degdegga – Barocaafimaad
africorruption – Bar Ama Baro
Gargaarka degdegga ahi waa kaalmo gaaban oo la bixiyo markii wax lama filaan ahi dhacaan si loo badbaadiyo nolosha, loona hortago dhaawac dheeri.
Gargaarka degdegga ahi waa kaalmada ugu horraysa, uguna muhimsan oo la bixiyo marka. FIRST AID. GARGAARKA DEGDEGGA AH. This booklet contains.
Video: Waa maxay gargaarka deg dega ahl Qaybta Gargaarka Degdegga ah oo la Fahmo sida ay u Shaqayso (Understand. the Emergency Room-Somali)
Baro oo naf ku badbaadi habka CPR: Gargaarka Degdegga Wadnaha oo istaaga waa xaalad khatar ah oo keenaysa in uu qofku u dhinto.
Al-itixaad Al-islaami waa urur — sida magaciisa laga garan karo — ku doodaya inuu yahay mid u halgamaya sidii ay Soomaaliya uga dhalan lahayd dawlad shareecada Islaamka ummadda ku xukunta.
Waxay, sidaas darteed, isaga gaabsadaan inay yihiinwaxyaabo xun oo mudan in la naco Makruuhaatmaxaa yeelay Eebbe keliya ayaa waxna xaaraamayn kara, waxna xalaalayn kara, awooddaasna cidi lama wadaagto. Ha yeeshee, ma aha wax fudud, xataa haddii xeer-ciqaabeed lagu fuliyo qof kasta oo joojintaas is-hor-taaga. Haddii aanu ururkaasi sidaas yeelin, wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu ka horyimaado oo dagaal aan dhammaad lahayni dhex-maro xukuumad, kolley, dhalan doonta oo mid dhexe ama mid gobol ah, rabtana inay awooddeeda dalka wada gaarsiiso, iyada keliyihina hub haysato.
Wax Scenario badan ay is barbardhigeen waxba ku keeni waaye, taasu waxay ku tusaysaa inaynan waxbadan qiyaasi karin, mustaqbalkan waxaba ka badali karin, arintuna alle gacantiisa ku jirto, xigmadiisuna weyntahay meesha uu marsiinayo asaagaa og dadkaan aduunka ku nool.
Waxaa naloo sheegay qof waliba inuu abxaddiisa furo, una diyaariyo in la baaro. Qaybta Gedo ee ururka oo ah qaybta keliya ee dhul haysataa waxay ku degdegaysaa inay qabsato gobolka oo dhan, ka hor inta aanay imaan xukuumadda ay soomaalidu wada sugeyso.
Waa maxay gargaarka deg dega ahl Dhirta waaweyn ee webiga jiinkiisa ku sariiran ayaa iyagana hoostooda wax lagu kala iibsadaa.
Ciddii doontaa ha hoggaamisee, Al-itixaad waa urur jira, urur hubaysan, urur ku hawllan ciidan-qorasho joogto ah, urur leh xiriir dibadeed. Xubno waaweyn oo ka tirsanaa golihiisi wasiirrada iyo saraakiishii sar-sare ee maamulka rayadka ah ayaan ka daalin kufinta taliska maalinna, gaar ahaan tobankii sano ee jiritaankiisii ugu dambeysey; kuwaas 00 ay ahayd, inta ay ku jiraan, inay colka ka daafacaan, haddii kale isaga baxaan oo si toos ah jabhadaha ugu biiraan.
Waxaa ka mid ahaa:. Dhallinyarada ururka ku soo biirta marka laga dhaadhicinayo jaadka iyo sigaarka inay joojiyaan, waxaa loo sheegaa inay, diin ahaan, xaaraan yihiin oo khamriga iyo khamaarka la mid yihiin. Masruufka reerka ama reeraha ka sokow, wade walba waxaa laga doonayaa inuu gaariga ka soo saaro kharashka shidaalka iyo kolba biraha ka xumaada beddalkooda; kuwaasoo, haddii la heloba, aad qaali u ah.
Nov 18, – Xil ka tegidda Drs: Maryan Qaasin Wasiiraddii gargaarka iyo maareynta.
Ma rabin, in aan afaarahooda galo, oo war WADAAD waa hore ayaan is ka waabay, Ogadeen= oogaaadeen, kan difaaca xuduudaha cirifyada dega. iyo tan Maxkamadaha oo ay ugu sareyso Maxkamad sare oo Federaai ahl. Soomaall-Ingmlsl ahl halkan?. Joog Hospital Dhakhtar, Cusbataal First Aid Gargaarka degdegga ah Pohce Boohs Ambulance Dhooh.
Video: Waa maxay gargaarka deg dega ahl Gargaarka deg dega ee shubanka Emergany care of diarhea and ORS
It IS about 85 degrees -Waa daa 85 darajo Is It very cold outsIde? Waa maxay taarnkhdu maanta?
Midda hore waa see Soomaliyi godka ugu dhacday?. Maxay Galabsatay Soomaali ee gaajada iyo faqriga, jahliga, dagaalka ahliga, cudurada iyo dacdaro in lagu jiido jid qalad ah, waa degdega, taasoo ah cadowga ugu weyn ee.
qabtaan difaac kaliya maaha ee waa u gargaarka umadan waqtiga.
Shirarkaas waxaa Gobolka Gedo iyo degmooyin Galguduud ka mid ah ka matalaayey jabhadda SNF oo iyada maamulka iyo siyaasadda geyigaas looga dambeeyo. Waxay ka tallawday, jebisayna xeer awel hore la degsaday; dulucdiisuna ahayd in laga gaabsado arrimaha sifooyinka Eebbe ku saabsan ee muranka geli kara. Tallaabadaas uu Ugaasku ku dhaqaaqay waxay ka dambaysay dareen dadweynaha gobolka ku baahay oo ku saabsanaa sida firfircoon ee 2dii sano ee ina dhaaftay ay Itixaadku ugu dedaalayeen inay degmooyin dheeraad ah qabsadaan.
Xisaab fudud waaarday waa hadii aadan ku darin intii ay ardadu kordhi lahayeen sanadwalba…. Arrin ay ku kala qaybsameen ayay noqotay, heshiis loo dhan yahayna waa laga gaari waayey, kolkii ay madaxdii sare ku adkaysatay ciidankoodu inuu dirirta bannaanka ka joogo ilaa toos loo soo weeraro. Show nin baa xanuunsaday.
Waxaa ka dhaadhacday waxyaabihii uu, diin ahaan, rumaysnaa inay sax ahaayeen meel walba oo jasiiradda carbeed ah inuu si degdeg ah ku gaarsiiyo.
Waa maxay gargaarka deg dega ahl Wuxuuna Hilowle sidoo kale sheegay in Isbitaalkooda ay ku dhinteen Saddex qof oo ka mid ahaa dadka dhaawacyaddu ka soo gaareen Dagaaladda ka soo cusboonaaday Muqdisho.
Sababaha dhaqaalaha iyo kuwa siyaasadda ka sokow, waxaa iyadana la soo qaadi jirey sabab kale oo ahayd: Wuxuu Maraykanku doonayaa inuu indhaha ku hayo, isna hortago dhaqdhaqaaqa seef-la-boodka ah ee Islaamka ku abtirsada oo danihiisa fog ee gobolka halista ku ah; Masar, Soodaan, Itoobiya, Iiraan iyo Soomaaliya oo ay hadda ku xoogeysanayaan.
Wuxuuna sheegay in dagaalka uu ku soo biiray markii Muuse Suudi Maleeshiyadiisu ay billaabeen inay ka garab dagaalamaan kuwo Hoteelka Global. Waa inuu qirtaa habka system-ka lagu soo doortay inuunan saxnay ee uu umadan gaarsiin doono qof walba inuu doorashada ka qayb galo one man one Vote.
Waduhu waa qayilayaa, waxaana u shidan cajalad si xun u duuban oo uu ka dhegeysanaayo qaar ka mid ah heesihii jacaylka ee Khadra Daahir.
3 thoughts on “Waa maxay gargaarka deg dega ahl”
Gugii dhowaa iyo dayrtii ka horreysey midna ma helin. Waxaana laga maqlayay Muqdisho oo dhan Dhawaqa Madaafiicda iyo Rasaasta ay Labada dhinac is waydaarsanayaan.
Waxay qayb fiican ka haysteen hubkii faraha badnaa ee ay soomaalidu ka boobta xeryihii Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo kuwii Booliska, had iyo jeer iyo maalin walbana waxay diyaar u yihiin hub iyo saanad dheeraad ah inay dadweynaha gobolka ka gorgoriyaan, kana iibsadaan.